Greyhound (2020) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
IMDb…7.2,,,Rotten….78%အခြိနျကား ဒုတိယ ကမ်ဘာစဈကာလ…ကပ်ပတိနျ Ernest Krause ဟာ Greyhound ဆိုတဲ့ escort warship ကွီးကို ဉီးဆောငျပွီးNorth Atlantic ဒသေကွိုဖတျသနျးဖို့ပွငျဆငျရတယျ..ဒီခရီးစဉျမှာ သူဟာ မဟာမိတျသင်ျဘော၃၇စီးကိုစောငျ့ကွပျဦးစီးရတဲ့ကှနျမနျဒါ…
သူ့အပျေါမှာ အသကျပေါငျးမြားစှာ မူတညျနတေယျ….
ဘာလို့ဆို ခရီးစဉျမှာရနျသူ့ ဂြာမနျ U-boatတှေ ရငေုတျသဘျောတှဟော သမေငျးတှလေို့ သူတို့ကိုဇီဝိနျခြှဖေို့စောငျ့နလေို့ပါပဲ….ခရီးစဉျစကထဲက ရနျသူတှဟော Greyhound ကွီးနဲ့မဟာမိတျသဘျောတှကေို အမဲလိုကျသလို တဝုနျးဝုနျးစဈမကျြနှာဖှငျ့ပါတယျ…ကပ်ပတိနျ Ernest Krause တဈယောကျ ဘယျလိုတှရေငျဆိုငျသှားမလဲဆိုတာကိုတော့….ဒီရုပျရှငျကားကွီးဟာ C.S Foresterရဲ့ 1955 ခုနှဈကထုတျဝတေဲ့ The Good Shepherd ကိုအခွခေံထားပွီးCaptain ရဲ့နရောမှာတော့ အားလုံးရဲ့အခဈြတျောမငျးသားကွီး Tom Hanks ကသရုပျဆောငျထားပါတယျ…
စဈပှဲရဲ့အလယျမှာ ရရှိတဲ့ အခကျြအလကျတှမေူတညျပွီးစက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျး မှနျကနျတဲ့ အမိနျ့ကိုပေးဖို့က တကယျ့ကိုမလှယျပါဘူး…တဈခကျြလောကျမှားလိုကျတာနဲ့အားလုံးအသကျပြောကျသှားတဲ့အပွငျ သူစောငျ့ရှောကျတဲ့ သဘျောတှလေညျး အလှယျတဈကူဆုံးရှုံးရမှာမို့တာဝနျက ကွီးလှနျးလှပါတယျ….ဒီရုပျရှငျဟာ battle scene တှကေ ဇာတျလမျးစပွီးကို မကွာဘူးဝုနျးဂြိနျးနဲ့ကိုတှယျတာပါ…ကွညျ့ရှုသူ ကိုယျတိုငျ ကပ်ပတိနျ Ernest Krause နရောကိုရောကျသှားပွီးမှနျးကွတျလာပါလိမျ့မယျ…ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး….
ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Wutyi May ဖွဈပါတယျ
IMDb…7.2,,,Rotten….78%အချိန်ကား ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကာလ…ကပ္ပတိန် Ernest Krause ဟာ Greyhound ဆိုတဲ့ escort warship ကြီးကို ဉီးဆောင်ပြီးNorth Atlantic ဒေသကို ဖြတ်သန်းဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်..ဒီခရီးစဉ်မှာ သူဟာ မဟာမိတ်သင်္ဘော၃၇စီးကိုစောင့်ကြပ်ဦးစီးရတဲ့ကွန်မန်ဒါ…
သူ့အပေါ်မှာ အသက်ပေါင်းများစွာ မူတည်နေတယ်….
ဘာလို့ဆို ခရီးစဉ်မှာရန်သူ့ ဂျာမန် U-boatတွေ ရေငုတ်သဘေ်ာတွေဟာ သေမင်းတွေလို့ သူတို့ကိုဇီဝိန်ချွေဖို့စောင့်နေလို့ပါပဲ….ခရီးစဉ်စကထဲက ရန်သူတွေဟာ Greyhound ကြီးနဲ့မဟာမိတ်သဘေ်ာတွေကို အမဲလိုက်သလို တဝုန်းဝုန်းစစ်မျက်နှာဖွင့်ပါတယ်…ကပ္ပတိန် Ernest Krause တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့….ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးဟာ C.S Foresterရဲ့ 1955 ခုနှစ်ကထုတ်ဝေတဲ့ The Good Shepherd ကိုအခြေခံထားပြီးCaptain ရဲ့နေရာမှာတော့ အားလုံးရဲ့အချစ်တော်မင်းသားကြီး Tom Hanks ကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်…
စစ်ပွဲရဲ့အလယ်မှာ ရရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေမူတည်ပြီးစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း မှန်ကန်တဲ့ အမိန့်ကိုပေးဖို့က တကယ့်ကိုမလွယ်ပါဘူး…တစ်ချက်လောက်မှားလိုက်တာနဲ့အားလုံးအသက်ပျောက်သွားတဲ့အပြင် သူစောင့်ရှောက်တဲ့ သဘေ်ာတွေလည်း အလွယ်တစ်ကူဆုံးရှုံးရမှာမို့တာဝန်က ကြီးလွန်းလှပါတယ်….ဒီရုပ်ရှင်ဟာ battle scene တွေက ဇာတ်လမ်းစပြီးကို မကြာဘူးဝုန်းဂျိန်းနဲ့ကိုတွယ်တာပါ…ကြည့်ရှုသူ ကိုယ်တိုင် ကပ္ပတိန် Ernest Krause နေရာကိုရောက်သွားပြီးမွန်းကြတ်လာပါလိမ့်မယ်…ခံစားကြည့်ကြပါဉီး….
ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Wutyi May ဖြစ်ပါတယ်
Craig Tate Elisabeth Shue Jeff Burkes Joseph Poliquin Matt Helm Matthew Zuk Rob Morgan Stephen Graham Tom Hanks Travis Quentin
Option 1 storage.msubmovie.com 418 MB SD (480p)
Option2yuudrive.me 418 MB SD (480p)
Option3sharer.pw 418 MB SD (480p)
Option5sharer.pw 1 GB HD (1080p)